Kalenda ọnwa 2018 | Network Meteorology
Dị ka anyị si mara, ọnwa anyị nwere ụbọchị iri abụọ na asatọ zuru ezu. Satellite a na-aga n'ụzọ anọ ka ụbọchị ndị a na-aga. Usoro ama ama bụ: nke ọhụụ, nke na-eto eto, nke zuru ezu ma na-ebelata. Taa, anyị ga-egosi gị 2018 kalenda ọnwa jiri chi jiri n'ehihie niile, ihe ịrịba ama na ụfọdụ nkọwa mbara igwe. Anyị ga-amalite ịkọwa kalenda maka ọnwa nke Mee anyị nọ na anyị ga-agafe Disemba.
You chọrọ ịmata ụbọchị nke usoro niile nke ọnwa na ihe ọ pụtara? Na-agụ reading
1 Ọnwa n'ọnwa
2 Ọnwa na June
3 Ọnwa na July
4 Ọnwa na August
5 Ọnwa na September
6 Ọnwa n'ọnwa Ọktoba
7 Ọnwa na Nọvemba
8 Ọnwa na disemba
N’ọnwa Mee nke a anyị nwere ikpeazụ ọnwa iri na anọ na Mee 7 na ọnwa ọhụrụ na Mee 15. N’ọnwa a, ọnwa na-ewetara anyị ume zuru oke iji nwee ụlọ ọzọ, akụ na ụba, ezinụlọ ma ọ bụ ọrụ ụlọ. Tomalite mmega ahụ bụ nhọrọ dị oke mma na ụbọchị ndị a, yabụ na anyị anaghị edozi nrụgide oke.
Akpa nkeji iri na ise ga-aputa na Mee 22 na n’ikpeazụ, ọnwa zuru ezu n’abalị iri abụọ na itolu nke Mee. Ihe ịrịba ama ahụ bụ Sagittarius ma gosi anyị ọ joyụ na ịnụ ọkụ n'obi na njedebe nke ọnwa. Obi abụọ adịghị ya na ntụkwasị obi dị ọcha bụ ihe ndị ga-eso anyị. Mgbe anyị na-emesapụ aka n'ihe niile aka n'ụbọchị, anyị na-enweta mkpịsị ugodi nke obi nke ukwuu. Ofbọchị ọnwa gbazuru agbazu bụ nhọrọ dị mma iji hazie ọrụ egwuregwu.
Ọnwa na June
N’ọnwa Juun, oke okpomọkụ na mbido ọkọchị na-abịarukwu. Anyi ga eIkpeazụ nkeji iri na ise na June 5 na ọnwa ọhụrụ na June 13. Ihe ịrịba ama ahụ bụ Gemini. Usoro eji ekwu okwu nwere ike inyere anyi aka iru ndi mmadu ma gosiputa onwe anyi dika anyi di. Anyị kwesịrị iji nlezianya nyochaa ọnọdụ anyị nọ na ya wee mụta asụsụ ma ọ bụ bido ịmalite ọmụmụ ihe ọhụrụ. Ọnwa a dị njikere iwere ihe ọchị.
N'aka nke ozo, anyi g'enwe akpa nkeji iri na ise na June 20 na ọnwa zuru ezu na June 28. Ihe ịrịba ama ahụ bụ Capricorn. Ọnwa na oge a na-arụkwu ọrụ, na-arụsi ọrụ ike, na-etinye uche ma na-achụrụ ya àjà. Ike gị niile ịnagide nsogbu na idozi ha na-ebelata. Ahapụla ọrụ ọkara ime. Emotionalwa mmetụta uche gị ga-akwụsịtụ ntakịrị.
Ọnwa na July
N'etiti oge ọkọchị, otu ọnwa nke ezumike maka ọtụtụ, anyị ga-enwe nkeji iri na ise ikpeazụ na Julaị 4 na ọnwa ọhụrụ n’abalị iri na abụọ. Anyị ga-enwe ihu n'ehihie nke anyanwụ na akara nke Ọrịa cancer. Thesebọchị ndị a nwere ike ịbụ ihe siri ike maka ụfọdụ. Ọ dị mkpa ịmata onwe anyị na ịmara onye anyị bụ na ihe anyị na-achọ. Ebe anyị bi nwere ike ime ka anyị mata onwe anyị ma hụ na ihe anyị chere na ọ bụghị nke anyị. Ọ dị ezigbo mkpa ka ịgwa onwe gị eziokwu na ihe niile na-enweghị anyị ga-emechi oge na ndụ anyị.
El Mkpebi ọnwa anyị ga-enwe ya na July 19 na ọnwa zuru ezu na July 27, tinyere ngụkọta ọnwa ndị ọnwa na Aquarius. Bọchị ndị a ga-esikwa ike karị. Ajụjụ ndị bụ isi ga-edugarịrị anyị gafere ókè nnwere onwe ahụ. Anyị nwere ike ịchọta onwe anyị na ọdịmma dị iche iche, ọfụma nwere ọmịiko na mmetụta nke izu ike karị. Anyị nwere ike ịdọrọ karịa nke anyị na-eme, ma n'ụzọ anụ ahụ ma n'uche. Nke a dị mma na gburugburu ebe ọkụ, ezumike, na jụụ.
Ọnwa na August
El Ikpeazụ nkeji iri na ise ga-abụ na August 2 na ọnwa ga-ezo na 11th Ọgọstụ nwere chi jiri n'ehihie. Ihe ịrịba ama ahụ bụ Leo. Bọchị ndị a anyị agaghị enweta ihe ọ bụla na-enweghị itinye obi ike na iche iche n'otu n'otu. Ihe ha ga-agwa anyị n’ebe anyị bi agaghị eme ihe dị mkpa.
El ingrịbawanye nkeji iri na ise ga-abata na August 17 na ọnwa zuru ezu na 26 na akara nke Pisces. N'oge ndị a, echiche efu, nrọ na nghọta na-enyere anyị aka ịga n'ihu kwa ụbọchị. Oke oke na ọgwụ nwere ike ịnye gị njikọ nke mmanye. Zere ha. N’ụbọchị ndị a dị ọkụ anyị nwere ike ịmatakarị iduhie ma ọ bụ ghọgbuo anyị. Otú ọ dị, anyị nwere ike izere nke a ma ọ bụrụ na anyị akpọtụrụ ndị na-agwa anyị na a na-achịkwa anyị ma ọ bụ na-aghọgbu anyị. Jiri ụbọchị ndị a mee ihe n'ihi na ha ga-enwe ọmịiko karịa ndị ọzọ ma kee ihe.
Ọnwa na September
Na ọnwa a ga-ewere ọnọdụ ikpeazụ nkeji iri na ise na 1st na ọnwa ọhụrụ na 9th na ihe ịrịba ama nke Virgo. Septemba na-esonyere oge niile, nrụgide, nsogbu post-vacation, wdg. Enwere ike idozi agwa a site na ime obere mgbanwe. Mgbe anyị nyere iwu na obere, anyị nwere ike ịdị jụụ na nnukwu. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme iji nwee ọgụgụ isi.
El mbụ nkeji iri na ise ga-abụ 16 na ọnwa zuru ezu na 25th na akara nke Aries. Ihu igwe ga-abụ nke ime ihe, mbido na mmadụ iche iche. Bọchị ndị a anyị ga-akwaga ma ọ ga-ezu oke ịmalite ihe. Enwere ike ụfọdụ ọnọdụ nke ime ihe ike. Iji kpochapụ ha, ọ ka mma ịme egwuregwu n'èzí.
Ọnwa n'ọnwa Ọktoba
N’ọnwa Ọktọba ọnọdụ okpomọkụ na-amalite ịda ada, anyị na-ekele ụbịa mgbụsị akwụkwọ. Ọnwa na-agba agba ga-abịa na Ọktoba 2 ma jupụta na 9 na akara aka nke Libra. Anyị nwere ike inwe ịhụnanya ma ọ bụ rafuo. Omume gi nwere ike iju gi obi uto.
El Akụkụ mbụ ga-abụ Ọktọba 15 na ọnwa zuru ezu na Ọktoba 24. na ihe ịrịba ama Taurus. Ọnwa nke anyị ga-enwe n’ụbọchị ndị a ga-enwe ọ ofụ na anụ ahụ nke ukwuu. Okwu ndị dị mkpa dị mkpa, ma na nri, ezumike na mkpa ego. Anyị ga-achọ ime ihe anyị chọrọ ma nwee ihe nzuzu.
Ikpeazụ nkeji iri ga-ewere ọnọdụ na October 30.
Ọnwa na Nọvemba
Ọnwa ọhụrụ na-abanye ọnwa nke ọnwa asaa na asaa na akara nke Scorpio. A ga-enwe ike n'ụzọ ma ụjọ anyị ga-abawanye. Ọ dị mkpa ịmata nke kachasị mmetụta uche.
El mbụ nkeji iri na ise ga-abụ 14 na ọnwa zuru ezu na 23th na ihe ịrịba ama Gemini. Ihe niile gbara nkiti n'oge niile, ọnwa a na-ahapụ ya. Gwọ anyị ji di, ndị hụrụ anyị n’anya, ndị enyi anyị, wdg. A ghaghị idozi ha.
Ikpeazụ nkeji iri na itoolu.
Ọnwa na disemba
Anyị na-emechi afọ ahụ na a ọnwa ọhụrụ na Disemba 7 na ihe ịrịba ama nke Sagittarius. Ọ bụ oge anyị nwere ike itinye ihe egwu ebe ọ bụ na anyị ga-enwe obi ike na ume. Anyị nwere ike imeri n’ọgụ ndị ahụ.
El mbụ nkeji iri na ise ga-abụ 13 na ọnwa zuru ezu na 22th na ihe ịrịba ama Ọrịa. A ga-enwe mgbanwe ọnọdụ uche ịbụ ọnwa mmiri. Anyị ga-afụ ụfụ, nwee mmetụta ọsọ ọsọ ma anyị ga-enwekwu ikike maka ịkpọtụrụ na ngosipụta nke ịhụnanya. Have ga-abawanye ọkwa nke nsinammuo.
Site na ozi a, ịnwere ike ịnụ ụtọ ọnwa n’ọnwa ya niile n’afọ 2018.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kalenda ọnwa 2018